China Output 9KW 300L / min Uthuli imaski Ukwenza Machine mveliso kunye nabenzi | Frand
Isiphumo esiphakamileyo 9KW 300L / min Uthuli lweMask Ukwenza uMatshini
Indlela yolawulo: Ulawulo lwePLC
Weigtht: malunga 2Ton
Isakhiwo semaski yobuso: Maleko 3-4
Engenanto imaski ukwenza umatshini. Ngumatshini weqonga langaphambili wemveliso yemaski engalukwanga, ngumatshini ozenzekelayo ngokupheleleyo ukuvelisa iimaski ezingenanto ekutyiseni izinto ezingavunyelwanga, ukufaka kunye nokusika ucingo lwempumlo, ukubongoza, ukugcoba, iwelding ye-ultrasonic ukusika ukusika. kwaye yaqokelelwa kwisithuthi.
Ingcaciso yobuso Vuvu Ukwenza Machine
220V 60HZ okanye wena
Ukuveliswa kwemaski yobuso
I-60-80pcs / min
Izinto zobuso obuso
Ubume bemaski yobuso
Imisebenzi imaski ezilahlwayo Ukwenza Machine:
Lo matshini une-alloy aluminium rack. Inkangeleko ilula kwaye intle. Inokugqibezela ukwenza ukubonakaliswa ngexesha elinye kunye nokubumba okuchanekileyo. Ngamandla aphezulu angenisiweyo e-ultrasonic anokuwelda ngokuqinileyo kwaye izinto zenkunkuma ziya kukhutshwa ngokuzenzekelayo. Inkqubo yolawulo lwekhompyuter kunye nokufunyanwa kweefoto kuyenza ibe nokuthembeka okuphezulu kunye nezinga lokusilela okuphantsi. Imveliso inokusetyenziswa ngokubanzi kungcoliseko oluphezulu lwamashishini, iifektri kunye nemigodi.
Iimpawu imaski ezilahlwayo Ukwenza Machine:
1. Yamkela ubuchule boqobo boomatshini baseJamani, ngokwento yemaski esongiweyo, yenza iklip yempumlo kunye nemaski yomzimba ugqibe kube kanye ngolawulo oluzenzekelayo ngobuchule be-ultrasonic. Umgangatho ozinzileyo kunye nokusebenza okuphezulu.
2.Ngayenza imaski ye-2-5 yomaleko ekrwada ngokufunekayo.
3. Oku kwahlukile komnye umatshini wokugoba wokugoba, oku kufakela iyunithi yokufaka iklip kwempumlo: ikliphu yempumlo ingafakwa xa uvelisa imaski esiyifunayo, emva koko usonge iwelding kwaye uyenze, oku kuphucula ukuzenzekelayo kwaye kugcine indleko zabasebenzi umenzi.
Ulawulo lwe-PLC, ukubala ngokuzenzekelayo, ukusebenza ngokulula, imveliso entle yokugqiba.
5. Ukulawulwa kwemoto yeServo, ulawulo lobukhulu ngqo.
6. Isakhelo somatshini esenziwe nge-aluminium, iinxalenye ezinesingxobo, ukujonga ubuhle oburhabaxa kunye nokusebenza.
1 Iwaranti: 1 unyaka ukusukela kumhla wokuthunyelwa. Ukuba kukho nawuphi na umonakalo ngeli xesha libangelwe nguMthengisi, uMthengisi uya kuthi ke abonelele ngokugcina simahla kwindawo kunye nokufakwa kwezinto endaweni yasimahla (Ngaphandle kwamalungu anxiba ngokukhawuleza).
2 Umthengisi unikezela ngenkonzo yolondolozo lwexesha elide, kuphela iindleko zomsebenzi eziya kufunwa ukuba zingaphaya kwexesha lewaranti. Ukuba kukho naziphi na izinto zomonakalo ezifuna ukutshintshwa kwecandelo kwaye uMthengisi akanatyala, uMthengisi unelungelo lokucela indleko ezibonakalayo zokutshintsha indawo.
3 Umthengisi uya kuphendula nakubuphi na ubugwenxa ngaphakathi kweeyure ezi-4 ngomnxeba, nge-imeyile nangefeksi. Yenkonzo yolondolozo kwiphondo laseFujian ngaphakathi kweeyure ezingama-36, ngaphandle kwephondo leFujian ngaphakathi kweeyure ezingama-72. Ukutshintshwa kwezinto, elona xesha linokuxoxwa ngokudibeneyo.
4 Umthengisi unikezela ngoqeqesho lwasimahla lwabasebenzi abasebenzayo.
5 Umthengisi uya kubonelela ngolwazi oluchanekileyo lobuchwephesha, kubandakanya imiyalelo yokusebenza kunye nemizobo yokunxiba ngokukhawuleza
Egqithileyo 1550KG 1 Isigaba 50-55 iiPC / Min Imask ukwenza iMatshini
Okulandelayo: I-55pcs / min 6KG / cm2 Umatshini wokuThengisa iMask yoLawulo lweMask PLC engalukanga
I-A1: Sivelisa oomatshini bokupakisha kwaye sifezekisa i-OEM egqibeleleyo kunye nenkonzo yasemva kwentengiso.
I-Q2: Ndingazi njani ukuba umatshini wakho usebenza kakuhle?
I-A2: Ngaphambi kokuhanjiswa, siya kuvavanya imeko yokusebenza komatshini kuwe.
izixhobo zokwenza imaski
umatshini wokuvelisa imaski
umatshini wokwenza imaski engalukanga
Zomaleko ezintathu zoNyango ubuso Medical Imaski Product ...
10KW 30-40PCS / Min Zenzekelayo ubuso imaski Ukwenza ...
Ungcoliseko lwezonyango Imaski Ukwenza Umatshini NgeAlum ...
Zenzekelayo ngokupheleleyo Banokubulawa nonwoven 3 Layer Fac ...
40 Pieces / Min N95 Face Mask Ukwenza Umatshini
Isantya esiphakamileyo Ngokuzenzekelayo ngokupheleleyo i-N95 Mask Ukwenza Umatshini
oomatshini ubuso ukwenza imaski, umatshini wokwenza imaski engalukanga, non elukiweyo ubuso imaski ukwenza umatshini, ithumbu nokubotshwa umatshini, umatshini wokwenza imaski, umatshini wobuso bomaski,